ဒူဒူကြီး: Flow metering - Turbine flow meter
Flow metering - Turbine flow meter
Turbine flow meters တွေကို၊ super heated steam system တွေမှာ steam ရဲ့ flow rate ကိုတိုင်းတာ ဖို့ အသုံးပြုသလို၊ lubricating properties liquids တွေလို၊ fluid တွေရဲ့ flow rate ကိုတိုင်းတာရာမှာ လည်း၊ အသုံးပြုပါတယ်။ Turbine flow meters တွေအတွင်းမှာ၊ ဖြတ်သန်းသွားမယ့် fluid ဟာ၊ air နဲ့ gases တွေမပါဝင်တဲ့၊ သန့်စင်တဲ့ fluid ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။
Fig. Turbine flow meter
turbine flow meters တွေမှာ၊ multi-blade rotor ကို၊ primary element အနေနဲ့ flow meter chamber အတွင်းရှိ supporting wed မှာတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ rotor diameter ဟာ၊ chamber diameter ထက် အရွယ်အစားအားဖြင့်၊ အနည်းငယ်သာသေးငယ်ပါတယ်။ chamber အတွင်းကို၊ fluid စီးဝင်လာတဲ့ အခါ၊ fluid ရဲ့ velocity ကြောင့် rotor အလွယ်တကူလည်ပတ်စေဖို့၊ free-running bearings တွေကို၊ supporting wed မှာ ထည့်သွင်း တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ rotor လည်ပတ်တဲ့အခါ၊ turbine ရဲ့ rotation speed ကို၊ chamber အပြင်ဖက်မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ magnetic pick-up unit သို့မဟုတ် proximity switch unit မှ၊ လက်ခံရယူပါတယ်။
turbine blade flow meters တွေမှာ၊ moving parts လို့ခေါါတဲ့ လှုပ်ရှားလည်ပတ်နေတဲ့ အစိတ် အပိုင်းတွေ၊ အများအပြားပါဝင်နေတဲ့အတွက်၊ flow rate indicating အတွက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် influencing factors တွေရှိပါတယ်။
fluid ရဲ့ temperature, pressure နဲ့ viscosity, lubricating qualities, bearing wear နဲ့ friction, turbine blades တွေရဲ့ conditional နဲ့ dimensional ပြောင်းလဲ မှု၊ fluid ရဲ့ inlet velocity profile ကြောင့် rotor ပေါါမှာ သက်ရောက်နိုင်မယ့် swirl effect လို့ခေါါတဲ့၊ twisting သို့မဟုတ် whirling motion နဲ့ flow meter မှာဖြစ်ပေါါမယ့်၊ fluid pressure drop အစရှိတဲ့၊ အချက်အလက်တွေဟာ၊ influencing factors တွေဖြစ်ပါတယ်။
influencing factors တွေရှိတဲ့အတွက်၊ meter ရဲ့ reliability နဲ့ accuracy ကောင်းမွန်စေဖို့၊ turbine blade flow meters တွေကို၊ operational condition မှာ၊ calibration ပုံမှန်လုပ်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။
Fig. Bypass or shunt turbine flow meter
အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ pipe line တွေမှာတော့၊ bypass line အတွင်းမှာ turbine element တတ်ဆင် ထားတဲ့၊ bypass flow meter သို့မဟုတ် shunt turbine flow meter တွေကို၊ အသုံးပြု ကြပါတယ်။ main flow မှာ orifice plate တခုကို၊ restriction အနေနဲ့ ထည့်သွင်းတတ်ဆင် ထားပါတယ်။ main flow မှ၊ orifice plate ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ restriction ကြောင့်၊ parallel circuit အတွင်းကို၊ fluid ဟာ အလွယ်တကူ စီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
turbine shaft ကိုတတ်ဆင်ရာမှာ၊ turbine shaft နဲ့ bearing သို့မဟုတ် gland sealing ကြောင့်ပေါါပေါက် လာတဲ့ friction ကိုလျှော့ချဖို့ လုံလောက်တဲ့ sufficient mechanical arrangements တွေတတ်ဆင်ထား ပါတယ်။ turbine shaft လည်ပတ်တဲ့အခါ၊ ရရှိလာတဲ့ mechanical out put ကို၊ meter မှာအသုံးပြုပြီး၊ flow rate ဖတ်ယူပါတယ်။
turbine flow meter တွေကို၊ တတ်ဆင်တဲ့အခါ၊ Orifice plate flow meter လို၊ flow straight lines တွေမှာ တတ်ဆင်ရပါတယ်။ turbine flow meter တွေဟာ၊ တတ်ဆင်ပုံမှန်ကန်ပြီး၊ rotor bearings တွေဟာလည်း၊ ကောင်းမွနတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေခဲ့ရင်၊ turn-down ratio အနေနဲ့ (10:1) ခန့်ရနိုင်ပါတယ်။ accuracy အနေနဲ့ ± 0.5% of actual value ခန့်ရှိတဲ့အတွက်၊ accuracy ကောင်း သလို၊ ဈေးနှုံးသက်သာပါတယ်။
specific line pressure ဆိုတဲ့၊ ပုံသေသတ်မှတ်ထားတဲ့ fluid pressure မှာသာ၊ calibration လုပ်ထားတဲ့ အခါ၊ အကယ်၍ pressure variations ဖြစ်ပေါါတဲ့ အခါ၊ meter မှာ inaccuracies readout တွေဖြစ်ပေါါ တတ်ပါတယ်။ flow oscillates ဖြစ်တဲ့အခါ၊ turbine ဟာ over run သို့မဟုတ် under run နဲ့လည်ပတ်ပြီး၊ lag time ကြောင့် meter မှာ inaccuracies တွေဖြစ်ပေါါတတ်သလို၊ turbine wheel တွေ မကောင်းတော့ တဲ့ အခါမှာလည်း၊ meter မှာ inaccuracies တွေဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
low flow rates ကြောင့်၊ turbine wheel တွေလည်ပတ်ဖို့၊ စွမ်းအားမလုံလောက်ခဲ့ရင် meter မှာ၊ 'lost flow' ဆိုတဲ့၊ အခြေအနေကိုရောက် သွားနိုင်ပါတယ်။ fluid ရဲ့ viscosity မြင့်တက်လာတဲ့အခါ၊ low flow rates deteriorates တွေပေါါပေါက်လာပြီး၊ flow နဲ့ rotational speed တို့ရဲ့ non-linear relationship ကြောင့်၊ meter မှာ inaccuracies readout တွေဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
turbine wheel နဲ့ chamber housing တို့ရဲ့ကြားမှ၊ clearances ဟာအလွန်သေးငယ်တဲ့အတွက်၊ fluid မှာ၊ debris ဆိုတဲ့ အစအနလေးတွေ သာပါလာခဲ့ရင်၊ turbine wheel ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သလို၊ bearing wear ကိုလည်းဖြစ်ပေါါစေနိုင်ပါတယ်။ fluid ဟာ သန့်ရှင်းတဲ့ clean fluid ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပြီး၊ 100 μm
ထက်မကြီးတဲ့၊ particle တွေပါဝင်တဲ့ fluid တွေအတွက်သာ၊ Turbine flow meters တွေကို၊ အသုံးပြုသင့် ပါတယ်။
Reference : Steam Engineering Tutorials, http://en.wikipedia.org/
Image credit to : http://www.spiraxsarco.com/
Posted by ကိုထွန်း at 00:16
Labels: Automation and Instrumentation ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ
Photoelectric sensor (၃)
Limit switches , proximity switches တွေနဲ့ simple ...
Photoelectric sensor (၂)
Photoelectric sensor (၁)
Proximity sensor (၃)
Proximity sensor (၂)
Proximity sensor (၁)
Flow metering - Instrumentation - Capacitance base...
Flow metering - Vortex shedding flow meter
Flow metering - pilot tube flow meter
Flow metering - DIVA direct in-line variable flow ...
Flow metering - SLVA spring loaded variable area f...
Flow metering - Variable area flow meter
Flow metering - Orifice plate flow meter
Flow metering - Principle of Flow metering
Flowmetering - Fluid and Flow